Mashhurda - resipe
Ny lasopy Mashhurd dia mitovy amin'ireo kilasin'ny Ozbekistana toy ny pilaf. Saingy raha fantatra mivaingana ivelan'i Azia Afovoany io farany io, dia tsy voavaha ny mashhurda noho ny hafahafa ho antsika tazo voankazo, izay fototr'io sotro lehibe io. Na izany aza, tsy sarotra ny mividy azy io ankehitriny. Noho izany, fotoana izao hanitarana ny fifankazahantsika amin'ny karazana tsiro any atsinanana.
Any amin'ny faritra samihafa ao Ozbekistana misy ny resipeo manokana, ahoana no ahafahana mashhurdu. Mofomamy azy ireo amin'ny tsaramaso "loya", ary amin'ny poti-tsakafo. Saingy malaza kokoa ny vary amin'ny vary.
Ahoana ny fomba mahandro mashhurdu?
ny lamban'akanjony - 500 g;
peas mandeha - 200 g;
vary - 100 g;
Piso mena - 1 tapitrisa;
menaka legioma - 2 tbsp. lovia kely;
zira - 1/3 ny sotro;
karana - 1 bunch;
sira, dipoavatra mainty - hanandrana.
Ny mashhurd tena, toy ny pilaf, dia tsy azo omanina raha tsy misy kazan. Mafana ny solika ao anatin'io sambo mendri-kaja io. Esory miaraka amin'ny hena ny rambony. Mofomamy voalohany amin'ny vatomamy vato, mankany amin'ny moron-dranom-bary. Mahazo vilia isika, ary eo amin'ny toerany dia manaparitaka ny tapakila vitsy. Rehefa varahina ny hena dia alefaso ny tongolo-jaton'ny antsasaka, ary ny mololo - karoty. Afangaro mandritra ny 2-3 minitra amin'ny afo kely.
Manampia zava-manitra sy voatabiha miaraka amin'ny voatabia. Natsipitsipy tsara ny rano mangatsiaka ary natory teo am-pandriana. Mamerina ny taolam-paty izahay. Ho an'ny fahamendrehana dia mametraka mofomamy mena (tanteraka). Mandritra izany fotoana izany, dia ampiana kobato vita amin'ny potato sy tongolo gasy izahay. Solim, dipoavatra. Manidy ny saron'ilay kesika isika ary mandanja azy amin'ny hafanana midadasika. Manao izay azo antoka fa tsy tena mandoza ny lasopy. Rehefa mivezivezy ny vatany, fa tsy manomboka mandoaka, dia matory amin'ny vary voaloto. 5 minitra alohan'ny hanomanany azy dia manangona zana-trondro.
Amin'ny fomba mahazatra, mashhurdu dia ampiasaina amin'ny katikom, analogy amin'ny roninay. Azo nosoloina kofehy, kosika na yoghurt tsy misy sakantsakana izany. Heverina fa nahomby ny mashhurda raha toa ka misy sombin-tsigara eny amin'ny takelaka "dia". Ny savony dia matevina ary manankarena ka tsy azo lazaina mihitsy ny lovia voalohany. Noho izany, any Ouzbékistan, vahiny iray lafo vidy dia azo atao ny misakafo maraina, antoandro na ny sakafo hariva.
Hanina amin'ny fomba Meksikana
Sakay Bolognese ao an-trano - resipe
Chashushuli avy amin'ny kisoa
Strudel avy amin'ny mofomamy mofomamy - fanolokolo voalohan'ny fanaovana mofomamy ho an'ny tsiro tsirairay!
Sakafo ho an'ny kibabs
Basturma avy amin'ny trobaky ny akoho eo an-trano
Ahoana ny fomba hanaovana ny fiangonana ao an-trano?
Espaniola amin'ny teny koreana
Kutaby - fomba fitsaboana Azerbaijani mahazendana mahazatra
Polenta maina - solika
Ny tombotsoan'ny kanto
Lolo ambony loha
Ny Fikolokoloan'ny fijalian'i Kristy: inona no hitranga amin'ny sarimihetsika vaovao an'i Mel Gibson?
Famongorana ny sira
Costa Rica - toetrandro
Ahoana no ahazoana voatabia ao anaty trano fonenana?
Mandeha Amboara Amarey 2013
Tsy maty i Angelina Jolie: nihaona tamin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana ny mpilalao sarimihetsika
Tavoahangy miaraka amin'ny tantely
Variana amin'ny valin-doko